China HSL-YTJ2621 Akpaka Glass Cutting Machine ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | Huashili
Fagbaji Ọkọlọtọ ọrụ Tingcha njikarịcha software 1.Professional iko ọnwụ na kachasị typesetting ọrụ: ukwuu mma iko ọnwụ ọnụego na mmepụta arụmọrụ.
2 dakọtara na Italian OPTIMA kachasị sọftụwia na ụlọ GUIYOU sọftụwia ngwanrọ nke G koodu: Ghọta ọkwa nke faịlụ dị iche iche.
3.Fault nchoputa na mkpu ọrụ: Ọ nwere ike na-akpaghị aka idekọ na-agba ọsọ ọnọdụ nke igwe na mmepụta usoro, kpatara mkpu na ngosipụta nsogbu.
Eriri laser n'ọnọdu
1. Nchọpụta akpaaka na ntinye nke iko: Ngosipụta ziri ezi nke ezigbo ọnọdụ na ntụgharị ihu nke iko ahụ, na-achọpụta mmezi akpaka nke ụzọ mbepụ nke agụba, ma melite arụmọrụ
2. Intelligent ekara scanning: Onye nchoputa nwere ike amamihe i scanomi ekara akpọkwa na-akpaghị aka n'ịwa ndịna-aghọta ngwe ọnwụ.
Bee teknụzụ Mbepu nke na-egbu osisi na-achịkwa valvụ electromechanical ziri ezi na-achịkwa valvụ, na cylinder na-eme ka nrụgide ahụ dịrị n'otu iji mee ka agụba dabara n'ụzọ zuru oke nke iko iji belata, na-ezere ịwụli n'ihi nsogbu nke iko.
Ọrụ nhọrọ Telescopic ogwe aka ọrụ High nkenke pinion na ogbe mbanye na-adiaha na-eji dochie ihe mbụ ịghasa mbanye, oge ọ bụla loading na dechara site telescopic ogwe aka ije, igwe adịghị mkpa ịkwaga.
Ọ nwere ike na-achịkwa site na kọmputa kwadoro, na akpaka loading na ịcha nwere ike dechara enweghị ntuziaka aka, nke ukwuu mma arụmọrụ;
N'ihi nbelata nke ije, a na-ebelata igwe eji arụ ọrụ nke ọma na ndụ na nkwụsi ike nke igwe ahụ ka mma.
Ndenye akpaghị aka Dochie aha njirimara. Dabere na ihe ndị ahịa chọrọ, na-ebipụta akwụkwọ mmado na-edekọ ozi iko.
A na-etinye akara ahụ na iko iko ya na ya site na cylinder labeling.
(Anyị na-akwado ndị ahịa ka hazie ọrụ akara aha)
Iko mmebi ọrụ Wụnye mkpanaka ejector na ntanetị.
Sịlịnda ahụ na-eme ka mkpịsị ọbara ọbara wepu iko ahụ.
Transportgbọ njemNjirimara Ejiri mpempe akwụkwọ na-ebu ya. Ọ dịghị mkpa iji aka gị bugharịa iko ahụ.
The cutted iko nwere ike zigara ikuku sere n'elu iko na-agbasa table site ebu ebu, na-agbasa ọrụ a rụrụ na iko na-agbasa tebụl.
Atiya Oru ngo Ntụziaka oru Rịba ama
Nhazi ngwaahịa Mechanical akụkụ Igweetiti Ingka nká ọgwụgwọ mgbe ịgbado ọkụ nke thicker ngalaba. A na-edozi efere n'akụkụ nke efere site na gantry milling iji hụ na izi ezi na nkwụsi ike.
Ewepụghị osisi X-axis na Y-axis na-agba ọsọ dị larịị na-eji profaịlụ pụrụ iche nke aluminom, nke nwere ike dị elu na oke nkenke, ma na-adịgide adịgide ma kwụsie ike.
Akwa N'ịnabata helical ogbe na pinion Ọdịdị ka mma eze nha elu ike na n'ụzọ dị irè belata mkpọtụ
Mmanụ Mmanụ a na-enweta nke mma ncha na-agbaso usoro ndozi mmanụ na-ekpo ọkụ, na-enweghị ntinye aka.
Fan Ahaziri elu-ike ofufe, elu ifufe nsogbu na nnukwu eruba, hụ ezigbo iko floatation.
Cha mbanye moto 2 setịpụrụ elu arụmọrụ ulo oru akara raara onwe ya nye servo moto maka kpọmkwem akara na-eji ire ụtọ ọrụ.
Mesa Ogwe mmiri na-ekpuchi mmiri dị elu bụ mkpụrụ, ma kpuchie elu ya na ụlọ ọrụ na-egbochi mgbochi. Gbaa mbọ hụ na enwere ike iji gburugburu mmiri.
Akụkụ eletriki Nọrọ kọmputa High-arụmọrụ kọmputa usu maka ulo oru akara; ika ngosipụta dị elu.
Njikwa Huashil pụrụ iche akara osisi kaadị, zuru okè egwuregwu Toshiba PLC akara usoro.
Ngwa anya Na-eji Panasonic laser ziri ihe si na Japan abanye.
Ihe mmewere Ihe mbubata akara mbu nke mba ofesi dika OMRON, Panasonic.
Nka na ụzụ Ngwa igwe Akụkụ Ogologo * obosara * elu ： 3000mm * 4700mm * 1420mm
Isiokwu dị elu 880 ± 30mm (Kemeghi ụkwụ）
Ihe a choro n’ike 3P ， 380V ， 50Hz
Ike arụnyere 13kW （Jiri ike3KW）
Mkpakọ ikuku 0.6Mpa
Nhazi usoro Bee ugogbe iko MAX.2440 * 2000mm
Bee ọkpụrụkpụ iko 2 ~ 19mm
Isi doo ọsọ X axis 0 ～ 200m / min (enwere ike ịtọ)
Isi ọsọ Y axis 0 ～ 200m / min (enwere ike ịtọ)
Cha osooso 6m / s²
Cha oche oche Cha isi nwere ike gbanwee ogo 360 (nkwụsị ziri ezi nke usoro kwụ ọtọ na ụdị pụrụ iche)
Icha ezi ± 0.2mm / m （Dabere na nke nke ọnwụ akara tupu iko na-agbasa）
Name Akara Mba Njirimara Rịba ama
Njikarịcha ngwanrọ Guiyou China
Tingcha software Weihong China Meela ya n'ezie n'ezie
Linear square okporo ígwè T-mmeri Taiwan
Ihe eletriki AirTAC Taiwan
Solenoid valvụ AirTAC Taiwan
Photoelectric mgba ọkụ Omron Japan
Cha mma Bohle Jamanị
Akwa dị nro Kangerde China
Ikuku ikuku Anyanwu Taiwan
XX axis servo moto AKWAKWỌ China 1.8KW * 2 Igwe Intel
Y axis servo moto AKWAKWỌ China 2.2KW
N'itinye moto EKP China 1kw
Sistemụ Njikwa Toshiba Japan
Kọntaktị Schneider France
Ntụgharị AKW .KWỌ China
Na-emebi emebi AirTAC Taiwan
Isi agba NSK Japan
Etiti agba anọ AirTAC Taiwan
Air flotation ngwaọrụ Nhazi China Nhazi 3KW
Nsochi mgba ọkụ Omron Japan
Nyocha Panasonic Japan
Nsogbu nchọpụta usoro AKWASHKWỌ China
Gear ogbe T-mmeri Taiwan
Rịba ama：N'ihi agam n’ihu na-aga n’ihu nke akụrụngwa ahụ, a ga-agbanwe ụfọdụ nkọwa, ndị ọrụ azụmaahịa na-agba izu ga-enwe mmeri na ụdị kachasị ọhụrụ.
Nke gara aga: HSL-CNC3826 Akpaaka Cutcha Mkpa Mpempe
Osote: HSL-YTJ3826 Akpaaka Cutcha Mkpaaka + HSL-BPT3826 Glass Glass Breaking Table
Automatic Ewepụghị Glass tingcha Machine Price
Automatic Glass tingcha Assembly Line
Automatic Glass Loading Ma tingcha Machine
Automatic Labeling Glass tingcha Machine
Full Automatic CNC Glass tingcha Machines
Full Automatic Glass tingcha Machine
Glass Automatic Loading Ma tingcha Machine
HSL-YTJ3826 Automatic Glass Cutcha Machine + HSL ...